Fanatanjahantena : atleta 88 hiofana any Sina | NewsMada
Fanatanjahantena : atleta 88 hiofana any Sina
Nambaran’ny minisitra Andriamosarisoa Jean Anicet, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, omaly, fa atleta 88 mianadahy avy amin’ny taranja dimy : ny atletisma, fibatana fonjamby, ny lomano, ny badminton ary ny tenisy ambony latabatra, no handeha hiofana mandritra ny dimy volana any Sina. Hanainga ny volana marsa 2018 izy ireo miaraka amin’ny mpanazatra roa avy isaky ny taranja.
Araka izany, notanterahina ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny firenena roa tonta sy ny fitanana an-tsoratra ny fahafahana manatanteraka ilay tetikasa hanampiana ny lafiny teknika eo amin’ireo mpanazatra malagasy. Nambaran-dramatoa Yang Xiaorong, masoivohon’i Sina, fa efa nisy manampahaizana sinoa 4 nalefan’izy ireo, hijery ifotony ny zavatra maika ilain’ny Malagasy.
Fantatra, nandritra ity lanonam-panaovana sonia ity, fa tetikasa maro ny ao anatin’ny vinan’ny roa tonta, toy ny handefasana mpanazatra sinoa eto Madagasikara, sy ny handefasana atleta malagasy hiofana any amin’izy ireo ary ny hanomezany fitaovana ara-panatanjahantena, hanatsarana sy hampakarana ny lentan’ireo atleta. Nomarihin’ny minisitra Jean-Anicet fa fanombohana ihany izao fa hivelatra amin’ireo taranja hafa izany, amin’ny andiany manaraka.
Tompondaka / Sary : Mamiherson